काठमाडौँ / पछिल्लो समय नेपाली हास्य टेलिसिरियलहरूको भिडहरू भित्र एक आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको एक लोकप्रिय हास्य टेलिसिरियल हो सक्किगोनी । यस सिरियलमा नयाँ कलाकारहरूको आगमन बढ्दो रहेको छ । पुराना कलाकारहरू यथावत् नै रहे पनि कथाअनुसार सक्किगोनी टिमले नयाँ कलाकार प्रतिभाहरूलाई स्थान दिँदै आएको छ । केही समय अगाडि नयाँ कलाकारको रुपमा भित्रिएको प्रियाना आचार्य रातारात भाइरल बनिन् । मधेसी हाउभाउमा प्रस्तुत भएकी प्रियाना “मुन्नी” नामले परिचित छिन् । सिरियलको सुरुवाती दिनमा जिग्रिको प्रेमिका बनेर अभिनय गरेकी मुन्नि अहिले बलेको प्रेमिका बनेकी छिन् । तस्बिर : उषा…
काठमाडौं, १५ पौष । पूर्व युवराज पारस शाह ४९ वर्ष पुगे , छोरीले दिइन् यसरी शुभकामना : पुर्बयुवाराज पारश शाह ४९ बर्षमा प्रवेश गरेका छन् ! जन्मदिनको अवसर मा उनलाई उनका साथीभाई आफन्त हरुले जन्मदिनको सुभकामना दिएका छन् ! २०२८ पौष १५ गते उनको जन्म भएको थियो ! १५ पौष २०२८ सालमा जन्मिएका पारसलाई छोरी पूर्णिका शाहले बाबुलाई महान भन्दै मन नौनी जस्तै नरम रहेको लेखेकी छिन् । अरुको पीडामा सान्त्वना दिनसक्ने भनेकी छिन् ।परिवारबाट टाढिएर पारस व्यक्तिगत जीवन बिताइरहेका छन् । उनी आफूलाई पूर्व राजपरिवारका सदस्यभन्दा पनि सर्वसाधारणका रुपमा…